Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Swansea Joe Allen ayaa ku biiri doona Liverpool, madaama kooxda ay diyaar la tahay inay bixiso lacagta 15ka milyan ginni eek u xiran in lagu burburiyo heshiiskiisa Swansea. (Daily Mirror)
Paris Saint-Germain ayaa diyaar u ah inay bixiso lacagta ay Tottenham ku rabto Luka Modric ee 40ka milyan ginni, taasoo keeneysa inay saxiixiisa kaga adkaadaan Real Madrid. (Daily Mirror)
Xiddiga Brazil Oscar ayaa laga yaabaa inuu Chelsea si rasmi ah ugu biiro maalinta jimcaha, iyadoo madaxweynaha kooxdiisa uu xaqiijiyay in wadahadaladu ay marayaan meeshii ugu sareysay. (Daily Mirror)
Gudoomiyaha kooxda Liverpool Tom Werner ayaa sheegaya in Brendan Rodgers uu go’aansan doono mustaqbalka ciyaaryahan Andy Carroll. (Daily Mirror)
Tottenham ayaa wax ka weydiisay Shakhtar Donestk ciyaaryahanka mudada dheer diirada u saarnaa Chelsea Willian. Tababaraha Spurs Andre Villas-Boas ayaa doonayay markii uu joogay Stamford Bridge, waxaana uu haatan rajeynayaa inuu u soo jiido White Hart Lane. (Daily Mail)
Tottenham ayaa sidoo kale wax ka weydiisay kooxda Fulham xaalada weeraryahanka Moussa Dembele, iyadoo haatan isku diyaarinaya nolol ka danbeysa Luka Modric. (Daily Telegraph)
Rajadii ay Liverpool ka qabtay inay soo xerogeliso kabtanka Poland Jakub Blaszczykowski ayaa burburtay ka dib markii ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Borussia Dortmund uu heshiis cusub oo afar sanno ah u saxiixay kooxda heysata horyaalka Bundesliga. (talkSPORT)
AC Milan ayaa wadahadalo ku riixeysa Manchester City oo ku aadan saxiixa weeraryahan Carlos Tevez. Kooxda Serie A ka dhisan ayaa dooneysay 28 jirkaan bishii Janaayo, waxaana ay weli xiiseynayaan ciyaaryahanka reer Argentina iyo saaxiibkiisa Eden Dzeko. (Daily Mail)
Newcastle United ayaa la xiriirtay kooxda Marseille oo ku aadan saxiixa ciyaaryahanka Faransiiska Loic Remy oo lagu qiimeeyo 15 milyan ginni. (Guardian)
Lakiin kooxda Newcastle ayaa beenisay in Demba Ba uu ku dhow yahay kooxda Rubin Kazan. Warar Russia ka imaanaya ayaa tibaaxaya in ciyaaryahanka iyo Kazan ay kawada hadalayaan heshiis shaqsiyadeed. (Daily Mail)
QPR ayaa dooneysa inay xiddiga da;da yar Raheem Sterling ku soo celiso Loftus Road. Tababaraha Liverpool ayaa doonaya in 17 jirkaan weerarka ka ciyaara uu ku fasaxo amaah si uu qibrad u soo yeesho. (Daily Mail)
Arsene Wenger ayaa diyaar u ah inuu suuqa geliyo xagaagan lacag gaareysa 40 milyan ginni, hadii Robin van Persie la iibiyo ama hadii kale. Tababaraha Arsenal ayaa kalsooni ku qaba inuu soo xerogeliyo xiddiga Malaga Santi Cazorla 48da saacadood ee soo socota. (The Sun)
Thierry Henry ayaa diyaar u ah inuu kala hadlo Arsene Wenger qorshihiisa mustaqbalka uu dib ugu soo laabanayo Arsenal, isagoo doonaya inuu door tababare kooxda ka qabto, sidoo kalena waxa uu diiday inuu meesha ka saaro inuu bisha Janaayo amaah ahaan ugu soo laaban doono Emirates Stadium. (The Sun)
Daafaca Manchester City Aleksandar Kolarov ayaa ku dhow inuu ku laabto Serie A gaar ahaan kooxda Inter Milan, isagoo u muuqda inuu gabagabeynayo heshiis 6.2 milyan ginni oo uu ugu wareegayo magaalada Milan. (talkSPORT)
AC Milan ayaa miiska u soo saartay kooxda Montepellier 6.5 milyan euro oo ay ku doonayaan daafacooda dhexe Mapou Yangi-Mbiwa, iyadoo ciyaaryahanka reer France uu ogolaaday inuu heshiis shan sanno ah u saxiixo kooxda Rossoneri. (Goal.com)
Tababaraha kooxda AS Roma Zeman ayaa soo dhaweeyay saxiixiisa cusub Matti Destro kaasoo maanta la filayo in lagu dhawaaqi doono heshiiska shanta sanno ah ee uu u saxiixay kooxda ka dhisan caasimada Talyaaniga. (Gazzetta dello Sport)
Matti Destro ayaa lagu wadaa inuu xiran doona numberka Marco Borrielo ee 22. (Gazzetta dello Sport)
Adriano Galliani ayaa qarka u saran inuu kooxda ku soo celiyo kubadsameeyaha reer Brazil Kaka, kaasoo ay ka soo deyrisay kooxdiisa haatan ee Real Madrid. (Gazzetta dello Sport)
Kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ee Juventus ayaa kala go’aansan doonta midkii ay si rasmi ah u ceyrsan laheyd weeraryahanka Arsenal Robin van Persie ama weeraryahanka Fiorentina Stevan Jovetic. (Gazzetta dello Sport)
Waxaa qarka loo saran yahay heshiisk ay kooxaha Inter iyo Juventus isku dhaafsanayeen ciyaaryahanada weerarka ka ciyaara ee Pazzini iyo Quagliarella. (Corriere dello Sport)
Kubadsameeyaha reer Brazil Kaka ayaa heysta 72 saacadood inuu go’aan kaga gaaro mustaqbalkiisa, hadii uu doonayo inuu u dhaqaaqo koox kale, ama hadii uu doonayo inuu kursiga keydka u fariisto Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda, waxaana ciyaaryahanka xiiseyneysa kooxdiisii hore AC Milan. (Marca).
Tababaraha kooxda Barcelona Tito Vilanova ayaa xaqiijiyay inuu xiiseynayo ciyaaryahanka Athletic Bilbao Javi Martinez, isagoo sidoo kale meesha ka saaray inuu iibinayo Dani Alves. (AS)
New York Red Bulls ayaa sidoo kale dooneysa inay la saxiixato ciyaaryahanka Real Madrid Kaka, lakiin ciyaaryahanka reer Brazil waa inuu jaraa boqolkiiba 50 mushaharkiisa hadii uu ku biirayo kooxda ka dhisan Mareykanka. (Marca)
Tababare ku xigeenka Real Madrid Aitor Karanka ayaa sheegaya in Luka Modric uu ku fiican yahay qaab ciyaareedka kooxda Los Blancos, lakiin weli wax heshiis ah ma aysan gaarin kooxaha Real iyo Tottenham. (Marca)
Tababaraha kooxda Tottenham Andre Villas-Boas ayaana sheegaya inay dhageysan doonaan dalabyada ciyaaryahanka u imaanaya, iyagoo ka quustay inay ka dhaadhiciyaan Luka Modric inuu xilli ciyaareedka soo socda iska sii joogo White Hart Lane. (Marca)
Kooxda Arsenal ayaa miiska u saartay Malaga 20 milyan euro oo ay ku doonayaan xiddigeeda reer Spain Santi Cazorla kaasoo ogolaaday inuu ka ciyaaro garoonka Emirates Stadium xilli ciyaareedka soo socda, lakiin go’aanka waxaa iska leh kooxda lacagta badan ee Malaga. (Marca)
Kooxda Barcelona ayaa heshiis la gaartay kooxda Boca Juniors oo ay kula soo wareegeyso weeraryahanka da’da yar ee reer Argentina Araujo. (Sport)
Kooxda Malaga ayaa ka iibineysa burburiyaheeda Xavi Torres kooxda Getafe kuwaasoo ku qaadanaya ciyaaryahanka 400 kun euro. (Marca)